Wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato hillaaca | Saadaasha Shabakadda
Isbaanishku wuxuu noolaa dhowr toddobaad ka hor, gu'gii dhammaaday runtii duufaan oo ay dhex martay biyo. Marka laga reebo roobabka mahiigaanka ah, waxa inta badan soo jiitay dareenka dadka intiisa badani waxay ahayd tirada badan ee falaadhaha taasi dhacday waana sida ku cad xogta rasmiga ah waa la diiwaangeliyey ilaa 22.000 rays. Tani waxay sababtay in dad badani ay rabaan inay wax badan ka ogaadaan waxa cajiibka ah ee halista ah Ifafaalaha saadaasha hawada.
1 Markay fallaadhaha dhacaan
2 Intee in le'eg ayay hillaac yeelan kartaa
3 Waa maxay sababta dhaqdhaqaaqa zig zag
Markay fallaadhaha dhacaan
Raysku maaha wax ka badan dheecaannada laga soo saaro xaddi badan oo tamar ah ku urura daruuraha. Waxay badanaa dhacaan markay heerkulku sarreeyo oo qoyaan badani ku jiraan hawada. Aad u badan yihiin xagaaga maxaa yeelay hawada kulul waxaa lagu dalacaa iyadoo lala xiriiro hawo qabow. Markuu roobku da'o, daruuraha ayaa soo saara tamartaas qaab falaadho ah.
Intee in le'eg ayay hillaac yeelan kartaa
Hillaacdu waxay ka kooban tahay tamar aad u badan oo ay gaari karto inuu dhinto. Waxaa lagu qiyaasaa in raajo kasta cabirkeedu yahay 5 kiilomitir oo dherer ah oo kaliya 1 sentimitir oo balac ah, tamarta ay sii dayso raajo way ka badnaan kartaa 5 bilyan oo joules oo tamar ah oo leh illaa 200.000 amps iyo 100 million volts.
Waa maxay sababta dhaqdhaqaaqa zig zag
Dhaqdhaqaaqan sida astaamaha u leh shucaaca waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in mas'uuliyadda weyn ee meelaha korontada ku jira ay ionized keenayso ha kala baxaan ion-yada wanaagsan ee kuwa xun. Qalabayntaani iskumid maaha oo wuxuu bilaabay inuu u dhaqaaqo sidii inuu abeeso noqdo oo uu soo saaro zig zag caan ah.
Waxaan rajeynayaa inaan cadeeyay su'aalaha qaar ee ku saabsan hillaaca iyo hillaaca, xiisaha ugu dambeeya ee aan taas kuugu sheego magaalada Koonfur Afrika ee Johannesburg waa halka ay ku dhintaan danabyada sanad walba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato hillaaca